Isidlo sakusihlwa sikaKhisimusi eRussia | Ukuhamba kwe-Absolut
Isidlo sakusihlwa sikaKhisimusi eRussia
KunamaKristu ayizigidi eziyizinkulungwane ezi-2.400 emhlabeni agubha uKhisimusi ngendlela ehlukile, ngokwesiko lezwe ngalinye nehlelo elithile lobuKrestu. Kulesi senzakalo, sizokhuluma ngokuthi leli holidi ligujwa kanjani eRussia nokuthi liyini idina likaKhisimusi elijwayelekile kulesi sizwe.
Amasiko leli lizwe elinalo maqondana nalolu suku oluthandekayo ahluke kakhulu kulokho esijwayele ukujwayela. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngoKhisimusi eRussia? Qhubeka ufunde!
1 Ugujwa nini uKhisimusi eRussia?
2 Lunjani usuku olwandulela uKhisimusi eRussia?
3 I-Advent Ngokushesha
4 Isidlo sakusihlwa sikaKhisimusi eRussia
5 Yimaphi amaculo kaKhisimusi ahlatshelelwa eRussia?
6 Futhi abantu baseRussia bayigubha kanjani iSanta Nöel?
7 Unyaka Omusha eRussia
8 Abantu baseRussia bazijabulisa kanjani ngoKhisimusi?
Ugujwa nini uKhisimusi eRussia?
Amabandla obuKrestu anenani elikhulu labathembekile emhlabeni, amaKhatholika namaProthestani, agubha ukuzalwa kukaKristu ngoDisemba 25. Noma kunjalo, iSonto Lobu-Orthodox alikwenzi lokho. Yize behlanganyela kakhulu enkolweni, ezimfundisweni, nasemicimbini nalawa maqembu angenhla, iningi lezinzalamizi ezingama-Orthodox ligubha uKhisimusi ngoJanuwari 7. Kodwa siyini isisusa?
Eqinisweni, ama-Orthodox, kuhlanganise namaRussia, nawo agubha uKhisimusi ngoDisemba 25. Yibo kuphela abalandela ikhalenda likaJulius, okunguJanawari 7 ekhalendeni likaGregory.
Lunjani usuku olwandulela uKhisimusi eRussia?
Ngendlela efanayo namaKatolika agubha ngayo usuku olwandulela uKhisimusi ngoDisemba 24, abaseRussia bakwenza ngoJanuwari 6. Ngo-10 ebusuku, eCathedral of Christ the Saviour eMoscow, umongameli uqhuba umkhosi wendabuko ezweni lonke.
Kuyaziwa ukuthi i-Advent yenzeka ngaphambi kukaKhisimusi, isikhathi sokulungiselela ukuzalwa kukaKristu. ERussia lapho kukholwa khona inkolo yama-Orthodox, I-Advent yenzeka kusukela ngoNovemba 28 kuya kuJanuwari 6. Kulesi sigaba, kwenziwa ukuzila okuzophela ngosuku lokugcina lwe-Advent ngokuzila ukudla usuku lonke. Kungaphulwa futhi kudliwe futhi lapho amakholwa ebona inkanyezi yokuqala.
Ekhuluma ngokudla, Uyazi ukuthi iziphi izitsha ezijwayelekile ezidliwayo ngesikhathi sedina likaKhisimusi eRussia? Imindeni ivame ukulungiselela izindlela zokupheka ezahlukahlukene. Lezi ngezinye zezinto ezivame kakhulu:
Kutia: Enye yezitsha eziphambili zephathi. Izithako ezisetshenzisiwe zinencazelo engokomfanekiso enkolweni yama-Orthodox. Ngakho-ke ukolweni ubhekisa ekuvukeni kukaKristu futhi uju luveza ingunaphakade. Umphumela uba ukudla kwesiko ongangeza kuwo amantongomane, omisiwe kanye nembewu yepoppy.
Irosi eyosiwe: Ngesikhathi se-Advent kwakungavunyelwe ukudla inyama ukuze kuthi lapho kufika uKhisimusi, abantu baseRussia bazilungiselela ngentshiseko izitsha ngalesi sithako ukuze bazile ukudla. Amahansi athosiwe angesinye sezitsha ezazithandwa kakhulu.
Ipiglet: Esinye isidlo esidliwa esidlweni sakusihlwa sikaKhisimusi eRussia ingulube encelayo noma njengoba abaseRussia beyibiza ngokuthi "ingulube ebisi". Kuphekwe ukosa ngephalishi nemifino. Kuyinto ejwayelekile ukuyithatha ekugcineni kwe-Advent ukuqeda ukuzila.
Coulibiac: Leli khekhe eligxotshiwe liyi-hit kunoma yiliphi iphathi futhi livame ukukhonzwa esidlweni sikakhisimusi eRussia. Kungenziwa ngezinhlobo eziningana zenhlama ehlukene ngezinhlanzi, irayisi, inyama, imifino, amakhowe, amaqanda. Kufana nokudla okuphelele ngocezu olulodwa lwekhekhe!
Vinaigrette: Kuyisaladi yendabuko ephekwe namazambane, izaqathe, ama-beet, ukhukhamba kuviniga namafutha. Nanamuhla kusengenye yezitsha eziyintandokazi zedina likaKhisimusi eRussia ngoba kulula ukukulungisa futhi akubizi. Kodwa-ke, imindeni efuna ukuthatha ulwazi lwamagceke abo iye kwelinye izinga engeza izinhlanzi ezinhle njenge-sturgeon.
Isaladi lika-Olivier: Ngenye isaladi elula yokwenza amaholide. Ine-carrot, u-anyanisi, iqanda elibilisiwe, amazambane, ukhukhamba, isoseji nophizi. Konke okuhlanganiswe nemayonnaise.
UKozuli: Leli ngelinye lamaswidi athandwa kakhulu eRussia ngesikhathi sikaKhisimusi. Lawa amakhukhi kaKhisimusi enziwe ngesinkwa sejinja esiphundu nesiraphu futhi ahlotshiswe ngoshukela wokhilimu. Izinhlobo ezijwayelekile lapho kulawa makhukhi kuyizingelosi, izinkanyezi zikaKhisimusi, izilwane nezindlu. Zisetshenziswa futhi njengomhlobiso wemikhosi.
Vzvar: Ngemuva kwesidlo sakusihlwa sikaKhisimusi eRussia lesi siphuzo sinikezwa njenge-dessert. Ilungiselelwe kuhhavini nge-compote eyenziwe ngezithelo namajikijolo enongwe ngamakhambi, izinongo nobusi obuningi. Kuyindlela enhle ewayini elishisayo noma nge-punch.
Itafula limbozwe ngotshani, kukhunjulwa indawo lapho uJesu azalelwa khona, futhi kubekwa indwangu yetafula emhlophe ngaphezulu.
Yimaphi amaculo kaKhisimusi ahlatshelelwa eRussia?
ERussia izingoma ezijwayelekile zikaKhisimusi zithathelwa indawo yingoma yesiSlavic eyaziwa ngokuthi iKoliadki. Le ngoma ivame ukuculwa ngosuku olwandulela uKhisimusi yiqembu labantu emgwaqweni begqoke imvunulo yesifunda.
Futhi abantu baseRussia bayigubha kanjani iSanta Nöel?
ERussia akuyena uBaba uNöel onikeza izingane izipho ngokungena ngoshimula ezindlini zazo kodwa uDed Moroz ephelezelwa ngumzukulu wakhe uSnegurochka. Lo mlingiswa uletha izipho kwabancane ngoSuku Lonyaka Omusha, ekhalendeni laseRussia ngoJanuwari 12.
Unyaka Omusha eRussia
Uma ucabanga ukuthi uKhisimusi ungoJanuwari 7 kanti usuku olwandulela uKhisimusi lungoJanuwari 6, ikhalenda laseRussia liyaqhubeka nokusebenza futhi uNyaka Omusha ugujwa ngobusuku bukaJanuwari 12-13. Iqembu laziwa ngokuthi "Unyaka Omusha Omdala." Ufuna ukwazi, akunjalo?
Kusukela ezikhathini zaseSoviet bekulokhu kungumkhosi obaluleke kakhulu othandwa kakhulu onyakeni futhi ngalolu suku umuthi we-fir tree uvame ukuhlobiswa, ogcotshwa inkanyezi ebomvu. Uphawu lobukhomanisi.
Abantu baseRussia bazijabulisa kanjani ngoKhisimusi?
Abantu baseRussia bazijabulisa ngezindlela eziningi ngoKhisimusi. Omunye wamasiko ajwayelekile kakhulu amaRussia wokuchitha amaholide uzothokozela amarinki okushibilika eqhweni. Zikhona cishe yonke indawo!
Ezinganeni, imibukiso ye-wink ihlelekile, ingqikithi yayo eyinhloko ukuzalwa kwengane engu-Jesu nokuthi izingane ziyayithanda.
Abantu abadala bakhetha ukuyothenga ukuze bathole izipho zikaKhisimusi. Izitolo nezindawo zokuthenga zihlotshiswe ngazo zonke izinhlobo zamalambu, amagarland, izihlahla ze-fir, amadoda eqhwa, njll. Izingane zivame ukunikezwa amathoyizi njengakuzo zonke izingxenye zomhlaba futhi abantu abadala banikezwa izincwadi, umculo, ubuchwepheshe, njll.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Isidlo sakusihlwa sikaKhisimusi eRussia
Abanye abalingisi abadumile abavela eMorocco